Dayactir aad u adag digsi
4.3 Macbook Pro Hard Drive Recovery r
5 Easy Siyaabaha Dayactir aad u adag Disk All Naftaada
Saxannada adag yihiin waxa ugu muhiimsan on your computer, sababtoo ah mid ka mid qalad oo aad waayi kartaa dhamaystiran xogta. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad ogtahay in cajaladaha adag yihiin qalab farsamo, in gabi doono isticmaalka muddo dheer ka dib. Statistics soo jeedin 60 boqolkiiba oo ka mid ah fashilaad drive adag tahay failure farsamo oo weli dhacaa sabab u ah si xun u isticmaalka. Halkan waxa ku jira sababo dhawr fashilka disk adag:
Dhaawac jirka oo dhacda haddii aad computer kuuskuus wax.
Filter ee qaadashada hawada la dhaafiyay iyo filter uusan si sax ah u shaqeeyaan ka badan kordhinta ee disk adag sababta kulaylka failure.
Lama filaan ah korontadu wuxuu sidoo kale keeni karaa inta lagu jiro hawlgalka ah waxay keeni kartaa disk adag failure.
Ka dhicitaanka micnaheedu ma aha in aad laga badiyay xogta aad. Haddii drive adag weli ku jiraa xaalad wanaagsan oo jir ahaan, waxaad dhiso kartaa adigoo. Halkan waxa ku jira shan siyaabood oo loo dayactiro aad drives adag.
Jidka 1- Disk Check iyo Fix Automatic
Jidka 2- Connection dhexeeya drive adag iyo guddiga ugu weyn
Xogta aad jidka 3- kaabta in drive adag dibadda iyo qaabka disk adag kharribeen
Jidka 4- Haddii aad isticmaalayso Mac ah, isku day Disk Utility si ay u cusboonaysiiyaan disk ah
Jidka 5- beddel PCB ku disk adag
Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii xogta qeybtooda disk adag?
Haddii aad isticmaalayso Windows u badan, ku siinayaa ikhtiyaarka ah oo fudud on hubinaya disk adag tahay baadi iyo hagaaji si toos ah. Waa sidan sidii aad eegi kartaa iyo hagaajin arrinta disk ah:
Hubi in aad xirto dhammaan barnaamijyada orodka ee ka hortaga. Hadda abuurtaan My computer.
Hadda xaq guji disk drive ay adag tahay in aad rabto in aad si aad u hubiso. Haddii ay tahay drive dibadda adag, hubi in aad horay u xiran la isticmaalayo cable USB. Ka dib xaq guji tagaan si ay fursad u Guryaha.
Marka uu furmo suuqa ka soo booda, u tag Tools tab oo taga si qalad Hubinta. Riix Check ah. Tani waxay u baahan doonaan fasax maamulaha si aad hubiso in aad leedahay. Xaqiiji ama qortaa erayga sirta ah in ay u oggolaadaan.
Hadda si toos ah u doortaan khaladaad nidaamka file si toos ah u iskaan iyo qaladaadkii hagaajin hagaajin.
Hadda geeddi-socodka iskaanka bilaabi doona si toos ah. Iyadoo ku xiran baaxadda aad disk adag, waxay qaadan kartaa ilaa dhowr daqiiqo.
Tani waxay arin aad u baahan tahay in lagu furo your computer ama laptop si loo hubiyo xidhiidhka ka dhexeeya drive adag iyo guddiga ugu weyn. Sababo la khasaara ah ama xun xiriir waxaa laga yaabaa in qalad ah. Ka hor inta aynaan bilaabin habka loo hubiyo in korontadu off si looga fogaado shilka kasta oo la sameeyo. Fur golaha wasiirada oo dhan of your computer iyo inay raacaan talaabooyinkan si ay u hubiso xidhiidhada ka dhaxeeya drive adag iyo guddiga ugu weyn:
Waxaad ka arki kartaa waxaa jira laba nooc oo ah mid ka mid cable u Sata in casaan iyo bixisaa midabka. Markaas waxaa jira Sata interface cable. Saar labadaan iyo in la hubiyo si fiican aad u nadiifiso. Haddii ay suurtagal tahay isticmaalka hawada si meesha looga saaro boodhka kartaan.
New waxay dib ugu drive ay ku xirmaan waa in aad ku xidhan Sata cable interface oo isku xira awood Sata ama isku xira 4-pin Moelx.
Hubi saaran hooyo aad u xirayaasha Sata. Ma habka nadiifinta isku mid ah iyo in ay ku xirmaan fiilada ka dib.
Hadda beddelaan on your computer iyo hubi haddii aan dhibaatada la xalin. Haddii aadan aqoon sida loo furo your computer hubi in aad u tagto farsamayaqaan.
Qaabka waa hab weyn in la soo celiyo aad u kharribmay disk adag ee gobolka asalka ah. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aadan qaab karaan, hubi in aad dib ilaa xogta oo dhan. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay lumiyaan baxay faylasha muhiim ah.
Waxaad dib kartaa computer oo dhammi ku ah disk adag dibadda iyo dib aad u wareejin karo ka dib markii formatting your computer. Waxaad mar kasta u isticmaali kartaa software xisbiga saddexaad laakiin daaqadaha ku siinayaa ikhtiyaarka in la dhisay guddi gacanta ka.
Haddaba tag si ay u bilaabaan iyo furto guddi gacanta.
Haddaba tag si System iyo Amniga.
Next u tag File Taariikhda iyo aad hesho fursada mooyee nuqul raad raac ah oo faylasha aad taariikh file.
Waxaa laga baarayo doonaa drive ka isticmaali karo in ay dib u kor xogta oo dhan. Just ay doorasho oo guji jeedin ku saabsan.
Tani waxay kaa badbaadin doonaa xog muhiim ah oo ku saabsan disk kale.
Fur guddi ay gacanta ku on your computer oo taga si nidaamka iyo ammaanka.
Riix qalab Maamulka iyo maareynta computer furan.
Haddaba tag in guddi ka tagay hoos kaydinta, guji maamulka digsi. Waxaad arki doontaa wax aad disk. Tag disk oo guji format.
Tani qaab doonaa disk kala. Waxaad mar walba aad u soo celin kartaa disk xagga dhabarka ee ilaa aad ka dhigay.
Haddii aad isticmaalayso Mac, waxaad isticmaali kartaa utility Disk si aad u hagaajinno disk adag. Tani waa hab fudud oo si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan doontaa in aad disk ee Mac OS Hubi in aad hore u xoojiyaa xogta aad ku disk adag oo kale, maxaa yeelay, inta lagu guda jiro dayactir laga yaabaa inaad lumiso xog muhiim ah inaad samaysaan.
Hadda dooran aad disk ka guddi bidix, oo markaas waa inay Dayactir digsi.
Marka geedi socodka la dhammeeyo ka tago rakibayo ka dibna u dhaco si ay u doortaan xawaaladaha Disk halkii guuleysatey.
Dooro OS ee kombiyuutarka halkii disk ka dibna waxaa la bilaabi.
Your computer mar booted doonaa oo hubi haddii ay khaladaad drive adag weli. Habkani xallin doonaan qaladaad qaar ka mid ah, laakiin haddii ay jirto wax dhibaato dhab ah oo la disk adag u fiicnaan lahayd in la tasho farsamo ah.
Waxaad ka bedeli kartaa guddiga wareeg ku daabacan aad disk adag haddii jirkaan ayaa ku burburay ama ku kharribeen. Waxay kale oo ay bixiyaan shirkadaha disk adag. La xiriir soo saaraha si aad u hesho PCB looga baahan yahay wadid aad u adag. Isticmaal tallaabooyinka soo socda si uu u bedelo PCB ah. Waa kuwan tallaabooyinku in la raaco:
Wax First, waxaad u baahan tahay inaad samayso dooro PCB saxda ah. Waayo, waxaad u baahan tahay afar waxyaabood oo ay u dhigma tirada model, tirada qayb, firmware, iyo tirada uu qoraalku. Waxaad ka eegi kartaa warqad yar ee kor ku xusan la code bar ah. Hel hage loogu helo hage u dhigma ka.
Marka aad hesho gabal ah oo si beddelan, beddelan galay guddiga cusub. Waxay u baahan doonaan in qaar ka mid ah waayo-aragnimo, kabida iyo qalabka. Iska saar jab hore iyo alxanka dib jab cusub. Tani waxay noqon doontaa arrin farsamo a yar, si aad u hubiso inaad hubiso Hanuuniyaa bedelka.
Hadda rakibi wadid aad u adag oo u hubiso ay u shaqayso on your computer.
Ka dib markii drive adag ayaa waxaa cusboonaysiiyey, waxaad soo kaban karto, aad badiyay xogta la isticmaalayo Wondershare kabashada Data software taas oo mid ka mid ah qalab ugu kalsoonaan karo oo waxtar leh inuu ka soo kabsado xogta. Waxaad soo kaban karto xogta saddex tallaabo:
Connect aad disk in computer. Daah-Wondershare software on your computer. Riix doorasho lumay kabashada File.
On screen soo socda, dooro disk adag oo aad rabto in aad soo kabsado xogta laga guji bilaabatay si ay u bilaabaan iskaanka.
On screen soo socda, waxaad u baahan doontaa liiska faylasha in la soo kabsaday karo, dooro faylasha aad rabto in aad soo kabsado guji soo kabsado.
Kuwaasi waxay yihiin qaar ka mid ah hababka ugu fudud in la dayactiro aad disk adag. Hadda, ma jiraan wax u werwero marka disk adag noqdo musuqmaasuq!
Sidee inuu ka soo kabsado Password Hard Drive oo Data ka Hard Drive
> Resource > Hard Drive > 5 Easy Siyaabaha Dayactir aad u adag Disk All Naftaada